ဒူးဒဏ်ရာခွဲစိတ်မှု ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆေးစစ်ချက်နဲ့အတူ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ “ကျော်မင်းဦး”
၂၀၁၄ အာရှယူ၁၉ပြိုင်ပွဲကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်နေရတာကတော့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ တစ်ချိန်က မြန်မာယူ၁၉အသင်းအတွက် အားထားရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကလပ်အသင်းမှာရော နိုင်ငံအသင်းမှာပါ အဓိကကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် ဘောလုံးလောကမှာ အချိန်တော်ကြာဝေးကွာခဲ့ရသူပါ။ သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် ဘောလုံးလောကမှ […]
တင်ပါးအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ထံမှ ထောက်ခံချက်ယူလိုက်သည့် မော်ဒယ်
တင်ပါးအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ထံမှ ထောက်ခံချက်ယူလိုက်သည့် မော်ဒယ် ==================== ==================== အမေရိကန်သူ ဆယ်ကျော်သက် တစ်ဦးသည် ညှို့အားပြင်းပုံများကို အွန် လိုင်းပေါ် ပုံမှန်တင်သဖြင့် နာမည်ကျော် လာသူဖြစ်ပြီး လုံးဝန်းလှပသည့် ၎င်းတင် ပါးသည် အစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သာပြ နိုင်ရန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ထံတွင် အစစ်ခံခဲ့ရ သည်။ […]
“ချစ်သူကို …အလင်းပြလိုက်တဲ့ …သင်ဇာဝင့်ကျော်”
သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမရဲ့ချစ်သူကို အလင်းပြလိုက်ပါပြီ။ သူဟာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Photo: Thinzar Wint Kyaw သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်သူကို တရားဝင် ထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒိုက်ကမ်းခြေ ခရီးစဉ်မှာ အတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ‘’ Together is […]
အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူများနေတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုနေသလား ထင်ရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ Video
စိုင်းထီးဆိုင်ပြန်လာဆိုထားတယ် ထင်ရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ HOLO .SN ပြန်ဆိုထားတဲ့ အပြာရောင်မျက်ရည် … အခုလို လွတ်လပ်ပွင့်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာတော့ အခွင့်အရေးတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ကမ်းကြိုနေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လက်ကမ်းကြိုနေခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ဂီတအနုပညာကို ဝင်စားပြီး ကိုယ့်ဝါသနာအရ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်ချပြချင်တဲ့အရာတွေကို လူအများသိအောင် တင်ဆက်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်တဲ့ Social […]
“သားဖြစ်သူက မိဘနှစ်ပါးကို ဓါးနဲ့ခုတ်မှုဖြစ် …”
သားဖြစ်သူက မိဘနှစ်ပါးကို ဓါးနဲ့ခုတ်မှုဖြစ် … သားက မိဘနှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ် … စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ သားက မိဘနှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ် ကော့သောင်း ၅ မေ ကော့သောင်းမြို့၊ အော်ကြီးကျေးရွာတွင် စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ သားက ဖခင်ဖြစ်သူအား ဓားဖြင့်ခုတ်မှု ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက […]
တောင်​ငူမြို ကားအတွင်း သေဆုံးသူ မိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးရဲ့ နောက်​ဆက်​တွဲသတင်း
သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ . မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိန်းမတန်ဆာမှ အူများထွက်လျှက် သေဆုံးနေကြောင်း သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ တောင်​ငူမြို ကားအတွင်း သေဆုံးသူ မိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦး သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးမှာ အသက် ၅ နှစ် ၆ နှစ်ခန့် အရွယ်ရှိကာ ပြီးခဲ့သော ၅ ရက်ခန့်က သေဆုံးနေသော အနေအထားဖြစ်ပြီး […]
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင်…အကျဉ်းချခံနေရသော …သရုပ်ဆောင်ဘုန်းလျှံမှ ..သန်မတကြီးထံအသနားခံစာပေးပို့ …
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင်…အကျဉ်းချခံနေရသော …သရုပ်ဆောင်ဘုန်းလျှံမှ ..သန်မတကြီးထံအသနားခံစာပေးပို့ … ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီိယိုသရုပ်ဆောင် ဘုန်းလျှန်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပါရန် အသနားခံစာ တစောင်ကို ကျွန်တော်မှတဆင့် သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ထံသို့ ယနေ့ တွင်ပေးပို့ ပါသည် ။ သူ၏ အမှုမှာ မတရားသက်သက် ကျခံရခြင်းဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေ၏ လွဲချော်မှုကြောင့် လူငယ်တဦးအနေဖြင့်၎င်း- နိုင်ငံတော်တော်အတွက်၎င်း- မြန်မာနိုင်ငံ၏ […]
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့ အကြောင်း …စ​နေ သားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ် ဆိုရင် …
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့ အကြောင်း … စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။​ စ​နေ သားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ် ဆိုရင် … စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို […]
“တောင်ငူမြို့ အမှတ် (၂) စခန်းအနီး ရပ်ထားသော ကားအတွင်းမှ ပုပ်ပွနေတဲ့ ကလေးငယ် ၂ ဦး အလောင်းတွေ့”
5.5.2019 နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ငူမြို့ အမှတ် ၂ စခန်း အနီး ရပ်ထားသည့် ကားအတွင်းမှ ကလေငယ် ၂ ဦး ပိတ်မိ သေဆုးံနေပြီး ပုပ်စော်နံမှ သိရသည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ ကနဦးသိရပါတယ် ။ အဆိုပါ အလောင်းများအား တောင်ငူဆေးရုံကြီးသို့ […]
ဆေးရုံကြီးရဲ့ နေအပူ၊ ဝေဒနာအပူ၊ ငွေအပူတွေအောက်မှာ အဖြေမရှိတဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များ
ဆေးရုံကြီးရဲ့ နေအပူ၊ ဝေဒနာအပူ၊ ငွေအပူတွေအောက်မှာ အဖြေမရှိတဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များ ဆေးသွင်းပြီး ပြန်ရတဲ့ရပ်ဝေးကလူနာအချို့လည်း သည်ဆေးရုံကြီးအတွင်းမှာပဲ ရှာကြံနေနေရတယ်။ လူနာစောင့်တောင် အတော်ပူတာ၊ လူနာဆိုရင်တော့ တော်တော်ခံရမှာ၊ ပြင်ပလူနာလာပြသူတွေကို နားခိုဖို့နေရာလေးကောင်းကောင်း ရှိစေချင်တယ်။ အရိပ်ရသရက်ပင်ကြီး တစ်ပင်အောက်မှာ ပလတ်စတစ်ဖျာခင်း ပြီး နားနေကြပုံပေါ်တဲ့ သက်ကြီးပိုင်း အရွယ်လူနှစ်ဦးကို အထုပ်အပိုးအချို့နဲ့ […]